Ogaden News Agency (ONA) – Dood adag oo dhexmartay Xasen Macalin iyo Afahayeenka Gumeysiga Ethiopia oo ka dhacday Radio deutschland
Dood adag oo dhexmartay Xasen Macalin iyo Afahayeenka Gumeysiga Ethiopia oo ka dhacday Radio deutschland
Posted by ONA Admin	/ February 20, 2013
Idaacada deutschland Qeybta Axmaariga ayaa wareysiyo xiiso badan ka qaaday Xasen Macalin oo ah Masuul kamid ah Hoggaanka Arrimaha Dibada ee Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya iyo Afayeenka Gumeysiga EThiopia. Wareyisagan ayaa Mudane xasen uu ku sheegay in shacabka Ogadneiya ogoleyn shirkadaha shidaalka Qoda inay dhulka Ogadeniya yimaadaan oo baadhitaano shidaal sameyaan maadama dhulkaas yahay dhul daggaal u dhexeeya shacabka Ogadeniya iyo gumeysiga Ethiopia kasocdo. Waxaa uu Xasen Macalin si adag usii xoojiyay warsaxaafadeedki Jabhada Wadaniga xoreynta Ogadeniya ugu digtay shirkadaha Shidaalka inaysan kuso lug gu’in dhulka Ogadeniya iyaga oo ka helaya damaanad been ah gumeysiga Ethiopia.
labadi bilood ee u danbeesay waxaa dhulka Ogadeniya ka dhacay daggaalo aad u xoog badan oo lagu burburiyay fadhiisimo ciidanka gumeysigu ku lahaayeen Ogadeniya halkaas oo hub badan iyo saanad kaleba lagaga furtay ciidamada Woyanaha. Waxaa sidaas u sheegay Idaacada Xasen Macalin. Isaga oo hadalkiisa sii wata oo ka waramaya cududa siyaasadeed iyo mida ciidan ee JWXO mudane Xasen waxa uu yiri
Shacabweynaha Somalida Ogadeniya gude iyo dibadba waxay garab taaganyihiin ciidamada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya. Waxaan ku leenahay in kabadan 67 Wadan Xafiisyo si xawli ah ku shaqeeya oo u adeega danaha shacabka Ogadeniya gaar ahaan sidii gumeysiga loola daggaali lahaa, sidaas awgeed Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya waxay mareysa waqtigii ay ugu xooga badneyd dhan siyaasadeed iyo dhan ciidan intaba.
Hadaba Idaacada ayaa si faahfaahsan uga warantay cududa Ciidanka Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya iyo daggaalada u dhaxeeya Ciidamada ONLF iyo kuwa Gumeysiga. sidoo kale waxa ay idaacadu ka warantay digniinihi faraha badnaa ee Jabhada ONLF siisay shirkadaha Shidaalka waxa ayna tusaale usoo qaateen shirkadihi China ee wadanka laga saaray daggaalki Cobole kadib markii Ciidamada ONLF ay burburiyeen fadhiisimihi ciidamada ilaalada u ahaa.
Dhinaca kale waxaa doodan ku fashilmay afahayeenka gumeysiga Ethiopia oo ku meerestay waxaan heshiis la galany garab ONLF ah, iyo arrimo aan dood gali karin. Wariyaha Idaacada ayaa qeexay in heshiiski dhicisobay ee Jabhada ONLF iyo Gumeysiga thiopia ku dhexmaray wadanka Kenya halkaas oo lagu kala kacay.
Hadaba Guud ahaan Saxaafada Afka Axmaariga ku baxda ayaa maalmahan aad uga hadlaysa Qadiyada Ogadeniya iyo daggaalada lagu naafeyay Ciidamada gumeysiga Ethiopia. Hoos ka daawo wareysiga oo Luqada Axmaariga ku baxaya-